Ungaluphatha kanjani uphawu lwendawo oluvela ku-iPhone yakho | iPhone News
U-Alex Vicente | 19/04/2022 16:00 | iOS 15, Okokufundisa namanyuwali
Impela ukubonile lokho uphawu lwendawo luvela ngezikhathi ezithile phezulu kwe-iPhone yakho, eduze kwewashi ledijithali noma isikhungo sokulawula ngokwaso eduze kolwazi lwebhethri. Lolu phawu lusitshela ukuthi olunye uhlelo lokusebenza noma idivayisi ngokwayo isebenzisa indawo yakho ngesizathu esithile, futhi, kunjalo, unethuba lokuyiphatha. Sikutshela ngezansi ukuthi ungakwenza kanjani.
Ubumfihlo bethu bungelinye lamaphuzu asikhathaza kakhulu uma sisebenzisa umakhalekhukhwini futhi u-Apple uyayazi. Ngaphezu kokufaka ezibuyekezweni zakamuva ze-iOS ithuba lokuvumela izinhlelo zokusebenza ukuthi zisilandelele enye idatha, sekunesikhathi eside kufaka phakathi ithuba lokuphatha ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa indawo yakho, uma ziyisebenzisa futhi singakwazi ngisho nokwazi ukuthi I-iPhone isebenzisa indawo.ukwenza kwasendaweni ukuthuthukisa uhlobo oluthile lokusebenza kwesistimu.
Ukuze uphathe izinsiza zendawo, kufanele sihlale sidlula Amasethingi> Ubumfihlo futhi ohlwini, Inketho yokuqala ezovela Indawo, lapho izokhombisa khona ngo “Yebo” noma “Cha” uma siyisebenzisa noma cha.
Uma singena into yokuqala ezovela un guqula ukuze ukwazi ukuyivula noma ukuyivala. Inqobo nje uma amasevisi endawo enziwe asebenza, kungenzeka sihlonze uphawu lwendawo phezulu emishinini yethu, uma luvaliwe, ngeke luvele njengoba lungekho uhlelo lokusebenza oluzokwazi ukuthola idivayisi yethu futhi ukusebenza kwe-GPS kuzovalwa.
Okokuqala nokuqonda ngokugcwele uphawu lwendawo olungavela (njengoba kunamathuba ama-3), I-Apple ihlanganisa inganekwane ezansi kule menyu enezinhlobo ezintathu zezimpawu ezingavela kusukela lapho uhlelo lokusebenza lusebenzise indawo yethu.
Umcibisholo onsomi ongenalutho izovela kumenyu esiyitholayo ukuze iphathe indawo lapho sesilungise lolo hlelo lokusebenza singasebenzisa indawo yethu ezimweni ezithile.
Umcibisholo onsomi ogcwele uma uhlelo lokusebenza lunayo usanda kusebenzisa indawo yakho.
Umcibisholo ompunga ogcwele lapho uhlelo lokusebenza lusebenzise indawo yakho ngesinye isikhathi ku Amahora wokugcina we-24.
Kubalulekile ukwazi lezi zithombe njengoba zinjalo "Kubha yethu yomsebenzi" sizokwazi ukubona okubili: umcibisholo ongenalutho noma umcibisholo ogcwele. Incazelo yayo izofana: umcibisholo ongenalutho uma senze kwasebenza ukuthi olunye uhlelo lokusebenza lungathola indawo yethu ngaphansi kwezimo ezithile (njengohlelo lokusebenza lwesimo sezulu) futhi umcibisholo uyagcwala, uma uhlelo lokusebenza luyisebenzisa njengamanje. Kepha qaphela lokhu, ngezinguquko zakamuva zesixhumi esibonakalayo nge-iOS 15, U-Apple wethule okunye okuhlukile: umcibisholo ogcwele onengemuva eliyindilinga eliluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu kusho ukuthi uhlelo lokusebenza oluvulile lisebenzisa indawo yakho ngaso leso sikhathi lapho kuvela khona le nkomba.
Ukuze uphathe lapho uhlelo lokusebenza lusebenzisa indawo yethu, sizoba nokwenzeka kumenyu esike sayifinyelela futhi Singafaka isicelo ngohlelo lokusebenza ukuphatha izimvume zokufinyelela endaweni ngayinye yazo ezoba nayo. Uma sesikwenzile, izinhlelo zokusebenza eziye zasebenza ngandlela thize yizo ezizokwenza ukuthi uphawu lwendawo luvele kubha yethu yomsebenzi. Sizoba nezinketho ezilandelayo ukuze sivumele uhlelo lokusebenza ukuthi lufinyelele indawo:
Ungalokothi: uhlelo lokusebenza ngeke lukwazi ukukuthola futhi ngeke lusebenzise i-GPS noma lubonise uphawu lwendawo.
Buza ngesikhathi esilandelayo noma uma wabelana: uhlelo lokusebenza luzocela ukufinyelela kuhlelo lokusebenza uma ulusebenzisa futhi, ngokunye ukusebenza, luyakudinga.
Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza: uhlelo lokusebenza luzokwazi ukufinyelela indawo yakho uma ivuliwe (noma uma lungemuva uma uvule ukuvuselela kwangemuva).
Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza noma amawijethi: uhlelo lokusebenza luzokwazi ukufinyelela indawo yakho lapho ivuliwe (noma uma lungemuva uma lucushiwe ukubuyekezwa kwangemuva) noma uma wenze kusebenze iwijethi yohlelo lokusebenza olushiwo.
Njalo: uhlelo lokusebenza luzoba futhi luzosebenzisa indawo yakho ngaso sonke isikhathi, noma luvaliwe.
Sizophinde sibe nokwenzeka kwezinye izimo vumela indawo eqondile yamadivayisi wethu noma, ngokuphambene nalokho, sifuna indawo elinganiselwe. Sibona umqondo omningi ekugcineni ezinhlelweni zokusebenza ezifana nobhuki, ezisebenzisa indawo yakho kuphela ukwazi izwe okulo futhi ezingadingi ukwazi umgwaqo njengoba kungase kusebenze uhlelo lokuzulazula.
Ngaphezu kwalokho, futhi kubaluleke kakhulu, singaphatha ukusetshenziswa i-iPhone ngokwayo eyenza indawo yethu. Kwaziwa “Ngezinkonzo Zesistimu”, ivela ekupheleni kohlu lonke futhi izosivumela ukuthi siphathe lapho i-iPhone isebenzisa indawo yethu. Lesi sigaba, ngaphezu kwalokho, singesinye salezo ezisivumela ukuthi songe ibhethri elithile uma sinqamula amanye awo esingawasebenzisi kakhulu ngoba, ngaphandle kwalokho, azobe edonsa indawo yethu ngaso sonke isikhathi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Ezinsizeni Zesistimu, sinethuba lokucindezela uphawu lwendawo ukuthi lungaveli kumabha ethu omsebenzi, kodwa hhayi izinhlelo zokusebenza.. Lokhu singakwenza ngokuvula noma ngokuvala i- i-toogle okubonakala ngezansi njenge Isithonjana sebha yesimo.
Ngale ndlela, singaphatha lapho uphawu lwendawo luvela nalapho lungaveli futhi sizokwazi ukuqonda kangcono izikhathi lapho isikhundla sethu sisetshenziswa khona. Ngokucushwa okulungile, sizokwazi ukuhlonza ngokwazi ukuthi uphawu luyavela yini, iluphi uhlelo lokusebenza olusibeka kumephu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungaluphatha kanjani uphawu lwendawo oluvela ku-iPhone yakho
I-Apple izonikela ngo-$1 ku-WWF kuyo yonke inkokhelo ye-Apple Pay eyenziwa ezitolo zayo noma kuwebhu
I-Apple TV ne-HomePod enekhamera ye-FaceTime